Free online ọrụ. Ngụkọta oge nke ụlọ gable ụlọ
Ngụkọta oge nke roofing ihe maka a gable ụlọ
Ezipụta akụkụ nke ụlọ
X2 - obosara nke n'akụkụ nke ụlọ nso mgbidi!
N'etiti mbadamba lathing R
Ngụkọta oge nke gable ụlọ
Y2 - ọzọ elu
X2 - ọzọ obosara
Ihe omume a iji gbakọọ roofing ihe: nọmba sheeting (ondulin, Nulin, wepụrụ ebubo ma ọ bụ metal), underlay ihe (korota, roofing ihe), ọnụ ọgụgụ nke mbadamba lathing na ntụhie ya.
I nwekwara ike gbakọọ ụfọdụ bara uru akụkụ nke ụlọ.
Ihe omume na-arụ ọrụ abụọ ụdịdị: a dị mfe gable elu ụlọ na a n'elu ụlọ abụọ n'akụkụ gables (n'akụkụ n'elu ụlọ), pịnye 1 na pịnyere 2.
-Akpachara anya! Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ na otu gable n'akụkụ, ahụ na-eji gbakọọ mbụ ụdị 1, mgbe ahụ pịnye 2. Ma site na data wepụtara ego nke ụlọ Akụrụngwa: trusses, purlins mbadamba, underlay na mpempe akwụkwọ ihe.
Ma, na ngụkọta oge nwere ike ịbụ ihe njehie. Mgbe niile, usoro ihe omume na-enye ohere maka he na isi ụlọ n'okpuru ụlọ n'akụkụ gables.
Na ngụkọta oge ị ga-ahụ nọmba ụfọdụ: hà ma ọ bụ olu nke na-ewu ihe onwunwe ọkara ụlọ na brackets - zuru size ma ọ bụ olu.
Na ịgbakọ mmezi ụlọ - a zuru size na akporo, na brackets abụọ nọmba: nke na olu nke onye na abụọ ọzọ ụlọ.
Warning! Mgbe ịgbakọ mpempe akwụkwọ nke roofing ihe onwunwe, na-n'uche na usoro ihe omume okụt square ụlọ.
Ka ihe atụ, 2.8 ka 7.7 ọtụtụ usoro nke Ibé akwụkwọ ke a n'usoro. Mgbe ezigbo ewu na-etinye 3 ahịrị.
N'ihi na ihe ezi ngụkọta oge nke ọnụ ọgụgụ akwụkwọ roofing iji belata elu gị mkpa kwa mpempe akwụkwọ ruo mgbe dum ọnụ ọgụgụ usoro.
Echefula ka ego nke yitewere ọzọ n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ịgbakọ olu nke ihe onwunwe isi ụlọ ntụhie ya, n'okpuru ọchịchị nke ụdị 2, usoro ihe omume adịghị agụnye bee-esi n'akụkụ gable. Nke a bụ n'ihi isi ike ụfọdụ na mmejuputa usoro ihe omume.
Ma eleghị anya, m ga-ekpebi n'ọdịnihu.
Otú ọ dị, ngafe ihe ntụhie ndị eleghi anya na-akwụsị ma ọ bụ ime mgbanwe ụfọdụ ha mgbawa.
A ga-enwekwa a iche iche usoro ihe omume ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi ngụkọta oge mpempe akwụkwọ nke roofing ihe.
Echefula na ịzụta ewu ihe ga-na ụfọdụ oke maka n'efu.